Chikonzero Nei Uchifanira Kuwana Mushonga Murairo paIndaneti
Mishonga yemuviri inonyanya kusangana nemuviri wako wose uye kusiya ganda rako richiona kushamwaridzana kwakanaka uye kwakanyorova. Iko pfungwa yekurapa kwemuviri ndeyekuti yakakosha chete kuchenesa, kuchenesa , uye kuchenesa ganda pamuviri wako sezvo iri ganda rechiso chenyu. Iyi nzira yehutano yakanaka kune muviri wako pasinei nenguva ipi yegore, asi inogona kunyanya kubatsira munguva yechando sezvo inopisa ganda kana inowanzooma uye isina kunaka.
Iyo inonyanyozivikanwa kurapwa kwemuviri muviri unoputika , dzimwe nguva unonzi chiputi chemuviri , munyu unopisa kana munyu-munyu wegungwa. Ichi chirwere chekufema chinenge chichiitika patafura yekusimbisa yakavharwa nepepa uye chikamu chikuru, chakaonda chepurasitiki. Sezvaunorara pamudumbu mako, kurapwa kwemasasa kunokonzera kusanganiswa kwegungwa munyu, mafuta, uye aromatics (semaroni) mucheche rako. Izvi zvinoderedza ganda uye rinosiya iyo inonzwa yakachena uye iri nyore.
Kana imwe muviri wako wose wakatsvairwa, izvo zvinotora zvichida maminitsi gumi kana gumi nemashanu, unozvigeza zvose kunze nesipo, uchisiya mazaru akanaka emafuta. Iko kurapa kunokurudzira, uye pfungwa yakanaka yekuita tsvina yako pamberi pemashoko ako kana ukasarudza kuva nezvose.
Zvimwe zvakasiyana-siyana mafuta anokosha kana zvipfeko zvinoshandiswa. Unogona kuwana maruva / peppermint munyu ruvara kana kuti cucumber salt salt, kana muviri wakatsvaga wakaitwa nekofi, nzvimbo dzakagadzika pasi pecan kana Napa Valley mbeu mazambiringa.
Dzimwe nguva kushandiswa kwemajini kunoshandiswa pashure.
Mutumbi Masks uye Wraps
Muviri wemasikiti uye muviri unoiputika kazhinji zvinotora mushure mekutsvaga. Mushure mekuchenesa kubva munyu uye kudzokera kune tafura yekurapa, nyanzvi yezveestheti ichakuunganidza iwe nedhaka, zvinyorwa, kana gungwa uye unokuputira muhombodo yemhepo. Iyi i "detoxifying" kurapa inokurudzira mararamiro ako emagetsi, achikurumidza kukwanisa kwayo kutakura zvinhu zvinosvibisa.
Kana chigadzirwa chacho chiri kamuki kana kupisa, iri "mushonga" wekurapa
Muviri wokuputira unogona kuvawo mushonga wokuputira uchishandiswa kurapa cellulite. Iko dzimwe nguva ine chimiro chinotapira chinobatsira mukunonoka kwepanguva pfupi.
Zvinofanira Kuita Mushure Mokurapa Muviri
Ganda rako rinogona kunge rakanyorovera mushure mekurapwa kwemuviri-kunyanya kana kuchibatanidza muviri wakadzika. Zvisinei, zvakanyatsonaka kuisa mvura mushure mekurapwa kwemuviri chero bedzi iwe uchiyeuka kuveura muviri wako ne sese, uye nyoroza kubvisa nguo yako yekushambidza kana iyofa muzvikwata kuti ubvise chero ganda rakafa kana kuti yakasara.
Makomborero eMutano Wemutumbi
Zvirwere zvepanyama zvinogona kubatsira kudzivirira kupindika, kuderedza cellulite, uye kuratidzika zvishoma nezvishoma zviratidzo zvekukwegura, zvichisiya ganda rako rinotarisisa uye richiri duku. Gungwa, munyu, dope, marasha, uye mineral wraps zvakare zvinoshandiswa zvakanakisisa zvekuchenesa ganda rako uye kubvisa tsvina. Sezvimwe nezvimwe zvepa spa, marapirwo emuviri anobatsira nehutano hwako hwepfungwa sezvaanoita kuderedza kushushikana, kugadzirisa mitambo yakaneta, uye zorora muviri wako nepfungwa dzako.
Chii Chinonzi Trigger Point Therapy?
Nzira Yekudzivisa Kuwana Mucheche Pahupenyu Hwako Huchi
Chii Chinonzi Mass Massage?
Icho Chete Chekunyora Bhuku Rokuputira Raunenge Uchida
Nzira dzakanakisisa dzekutengesa muGermany
Kutaurirana Stick Resort Arena Chigaro Chakate
Zvose Zvesheni Zvimbiso, Mhemberero uye Kufara muSan Francisco
Travel Guide kuBohol, Philippines
Memphis City Schools Schools
Fairmont Railway Hotels muCanada
Metropolitan Museum yeVashanyi Vezvigadzirwa Mutungamiri
Best Ice Skating Rinks kuLondon
Zuva raMama muSeattle Area
Sneaky Airline Mitemo Yekudzivisa
Kutenda Kwekutenda: Icho Chitsva Chaicho cheEngland
Memphis Holiday Markets